Lynda ANDRIATSITONTA apokalipsy, pasitera Mailhol	0 Commentaire mar 12, 2018
Natolotry ny antoko politika Gideona ny Fandresena ny Fahantrana eto Madagasikara (GFFM) ho kandida amin’ny fifidianana filoham-pirenena 2018 i Pasitera Mailhol André Christian Dieu Donné. Tamin’ny kongresy nasionaly notanterahina omaly 11 martsa 2018 no nanaovan’ny antoko fanambarana ofisialy ny firotsahan’ny filoha mpanorina ny fiangonana Apokalipsy ho kandida. « Tsy ho ela ny firenena Malagasy dia ho isan’ny firenena matanjaka ara-toekarena ». Io no fanamby ny antoko raha tonga eo amin’ny fitondrana izy. Nambaran’i Pasitera Mailhol fa miverina any amin’ny vahoaka ny 90 % ny vokatry ny harem-pirenena. Ho an’ny fitondrana kosa ny 10 %.
“Nirahin’Andriamanitra hamonjy ny fireneko aho. Ady ara-panahy no atao. Fahefana avy amin’ny Andriamanitra no handresena ny fahavalo ara-panahy”, hoy ny kandida an’ny GFFM. Handray anjara amin’ny fifidianana rehetra ny antoko. Vinam-piarahamonin’ny antoko politika GFFM ihany koa fanomezan-danja ny fahafahana maneho hevitra. “Hametraka toerana ahafahan’ny rehetra hanehoana hevitra ny fitondram-panjakana entiko raha lany filoham-pirenena ny tenako. Tsy maintsy manome fahazoan-dalana haneho hevitra ankalamanjana ny kaominina. Mibaiko ny mpitandro filaminana kosa ny eo anivon’ny prefektiora hitandro ny filaminana”. Fanovana rafitra no hitranga raha i Pasitera Mailhol no mitondra. Hanova ny rafi-pitantanana misy eto Madagasikara izy. “Amin’ny alalan’ny fifidianana no hametrahana izany. Asaina misafidy ny rafitra tiany hitondrana ny firenena ny vahoaka na demokrasia izany na didy jadona na hafa. Ovaina manaraka izany ihany koa ny lalam-panorenana.
‹ MALADIES ÉVITABLES PAR LA VACCINATION: La capacité des points focaux renforcée	› FONDATION AKBARALY: Le dépistage est gratuit